ဝကျဈဘရှနျး 0-5 မနျခကျြစတာစီးတီးပှဲအပွီး မှတျမှတျရရ အခကျြ7ခကျြ – Sports A2Z
ထိပျဆုံးကို တကျလှမျးခဲ့တဲ့ နိုငျပှဲ – မနျခကျြစတာစီးတီးအသငျးအနနေဲ့ မွို့ခံပွိုငျဘကျ ယူနိုကျတကျထကျ တဈပှဲလြှော့ကစားထားပမေယျ့ ပှဲစဉျရေးဆှဲမှုအရ ထိပျဆုံးမှာ ရပျတညျခှငျ့နဲ့ လှဲခြျောနခေဲ့တာ ကွာပွီလညျးဖွဈပါတယျ။ ဒီနပှေဲ့မှာတော့ ယူနိုကျတကျတို့ မကနျခငျ ၂၄ နာရီအလိုမှာ ၁၉ ပှဲခငျြး တူညီအောငျ ကစားခဲ့ရပွီး အိမျကှငျးမှာ စိတျအနှောငျ့အယှကျလာပေးထားတဲ့ ဝကျဈဘရှနျးကို အဝေးကှငျးမှာ အမှိုကျလှဲသလိုမြိုး ရှငျးလငျး အနိုငျယူလိုကျပွီး အမှတျပေးဇယားရဲ့ ထိပျဆုံးမှာ ရပျတညျနိုငျခဲ့သလို ပွိုငျဘကျတှကေို အကောငျးဆုံး စိတျဓာတျစဈဆငျလိုကျတာဖွဈပါတယျ။
စိတျအနှောငျ့အယှကျတော့ ပေးလိုကျရမှဆိုတဲ့ အဂြာယီ – မနျခကျြစတာစီးတီးအိမျကှငျးမှာတုနျးက သူ့ရဲ့ ကနျခကျြကို ရူဘငျ ဒီယကျဈက တားဆီးရာမှာ Own Goal နဲ့ အထိနာခဲ့ရတဲ့ အဖွဈကို စီးတီးဖနျတှေ မမသေ့ေးခြိနျမှာပဲ လီဗာပူးလျကိုလညျး သှားရောကျထိုးနှကျခဲ့တဲ့ နိုငျဂြီးရီးယားသား အနနေဲ့ ဒီနမှေ့ာလညျး ပှဲစပွီး မကွာခငျမှာပဲ အီဒါဆနျကို ဒုက်ခပေးခဲ့သေးပွီး ဂိုးသမားရဲ့ ကာကှယျမှုကောငျးခဲ့လို့သာ ဧညျ့သညျတှေ မကျြနှာ မပကျြခဲ့ရတာလညျးဖွဈပါတယျ။
ဒီဘရိုငျးနား မပါပမေယျ့လညျး – ဒီဘရိုငျးနား မပါဝငျနိုငျပမေယျ့လညျး ဒီကှကျလပျကို ကနျြတဲ့ အရညျအသှေးမွငျ့ကှငျးလယျလူတှကေ အကောငျးဆုံး ဖွညျ့ဆညျးပေးသှားခဲ့ပါတယျ။ သူ့ရဲ့ ဖနျတီးမှုနဲ့ ဘောလုံးဖွနျ့ဝမှေုအတှကျ မာရကျဇျ၊ စတာလငျနဲ့ ဘာနာဒို ဆေးလျဗားတို့က အဓိက တာဝနျယူခဲ့ကွသလို ဂိုးသှငျးတာဝနျကိုတော့ ဂှနျဒိုးဝမျက အပိုငျစားရယူခဲ့ပွီး လူငယျကစားသမား ဖိုဒနျကတော့ နှမျးဖွူးရုံလောကျပဲ ကနျြတော့တာပါ။ ပွိုငျဘကျတှအေနနေဲ့ ဘယျလျဂြီယမျသား ဒဏျရာရလို့ ဝမျးသာနတော အလကားပဲဆိုတဲ့ စီးတီးတို့ရဲ့ တုံ့ပွနျမှုလညျးဖွဈပါတယျ။
ကယျတငျရှငျကွီး ပထမဆုံးအကွိမျ မကျြနှာပကျြရတော့မှာလား – ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ တနျးဆငျးဇုနျထဲက အသငျးတှကေို အောငျအောငျမွငျမွငျ ဆှဲထုတျနိုငျခဲ့တဲ့ ကယျတငျရှငျကွီး ဆမျအလာဒိုကျဈကတော့ ဒီရာသီမှာ မမြှျောလငျ့ဘဲ ပထမဆုံးအနနေဲ့ မကျြနှာပကျြသှားရနိုငျပါတယျ။ အရငျတုနျးက တနျးဆငျးဇုနျရုနျးဘကျမြားပွားသလို အသငျးကွီးတှအေနနေဲ့ အမှတျလှူ အမှားခံနိုငျတာက ဒီနခေ့တျေနဲ့ ခွားနားနခြေိနျမှာ ဖူလျဟမျ၊ ရှကျဖီးလျဒျတို့နဲ့ သုံးသငျးတညျး ရုနျးရမယျ့ တနျးဆငျးဇုနျသားတှအေနနေဲ့ အပျေါက အသငျးတှေ မှားအောငျ ထိုငျဆုတောငျးဖို့ပဲ ရှိနပေါတယျ။
7 – Ilkay Gündogan has scored seven Premier League goals this season – his best ever scoring season in the top five European Leagues. Leader. pic.twitter.com/dtmp8wbauL
အကောငျးဆုံးခွစှေမျးနဲ့ ဂှနျဒိုးဝမျ – ကှငျးလယျလူ ဂှနျဒိုးဝမျကတော့ နောကျဆုံး ၈ ပှဲမှာ ၇ ဂိုး ရယူထားနိုငျခဲ့ပွီး မနျစီးတီးတို့အတှကျ ပွိုငျပှဲစုံမှာ သှငျးဂိုး ၉ ဂိုးနဲ့ အသငျးရဲ့ ဂိုးသှငျးဘုရငျအဖွဈ ရပျတညျနိုငျခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။ ဝကျဈဘရှနျးအသငျးကိုတော့ ပထမအကြော့ရော ဒုတိယအကြော့ပါ ဂိုးသှငျးယူနိုငျခဲ့ပွီး ၂ ပှဲမှာ ၃ ဂိုး ရရှိခဲ့ပွီး ဂြာမနျသားအနနေဲ့ ဖနျတီးမှုထကျ သှငျးဂိုးဘကျမှာ ပိုမိုတာဝနျယူနိုငျခဲ့သလို ဒီရာသီက သူ့ရဲ့ ကစားသမားဘဝ အမွငျ့ဆုံး ဂိုးသှငျးမှတျတမျးကိုလညျး ရရှိထားခဲ့တာပါ။
အဂှရေိုနဲ့ ဂဆြေူးဈတို့ အပယျခံရတော့မှာလား – စီးတီးတို့အတှကျ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ နောကျဆုံး ၇ ပှဲဆကျ အနိုငျရရှိခဲ့တဲ့ မှတျတမျးမှာ ပဲလစျေ့နဲ့ တဈပှဲမှာသာ ဂဆြေူးကို သုံးခဲ့ပွီး အဲ့ဒီပှဲမှာ ဘရာဇီးလျသားအနနေဲ့ ဂိုးမသှငျးနိုငျခဲ့လို့ ထညျ့တှကျမခံရသလို ဒီနမှေ့ာလညျး လူစားဝငျပွီး ဂိုးမရခဲ့တာကွောငျ့ အဂှရေိုနဲ့ပါ ပေါငျးပွီး ပွောရရငျ တိုကျစဈမှူးတှေ ဂိုးမသှငျးခဲ့တာ ၁၂ ပှဲ ရှိနပွေီဖွဈပါတယျ။ ဒီအတှကျ ဂှါဒီယိုလာကို စှယျစုံရ ကှငျးလယျလူတှကေ ကယျတငျခဲ့ရပွီး အဂှရေိုနဲ့ ဂဆြေူးဈတို့ရဲ့ အခနျးကဏ်ဍကတော့ မေးခှနျးထုတျစရာလညျးဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
၄၈ ဂိုးနဲ့ ဂိုးပေးထူးခြှနျ – ဆမျကွီး ကယျတငျရမယျ့ ပွဿနာ ဝကျဈဘရှနျးမှာ ကွီးမားတဲ့ အားနညျးခကျြကွီးတဈခုလညျး ရှိနပွေီး ဒီရာသီမှာ တခွားအသငျးတှထေကျ သိသိသာသာ ဂိုးပိုပေးရတဲ့ ဘကျဂီတှဟော ပှဲ ၂၀ ကစားပွီး ၄၈ ဂိုးအထိ ခှငျ့ပွုထားရတာဖွဈပါတယျ။ တဈပှဲပမျြးမြှ ၂.၄ ဂိုး ပေးထားရတဲ့ ဝကျဈဘရှနျးတို့အနနေဲ့ အနီးဆုံးက ပဲလစျေ့ထကျ ၁၂ ဂိုး ပိုပေးထားရခြိနျမှာ ထိပျဆုံးက ၁၃ ဂိုးသာ ပေးထားရတဲ့ မနျစီးတီးတို့ဆီကို နောကျထပျ ၅ ဂိုး အလှူပေးခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။
ထိပ်ဆုံးကို တက်လှမ်းခဲ့တဲ့ နိုင်ပွဲ – မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းအနေနဲ့ မြို့ခံပြိုင်ဘက် ယူနိုက်တက်ထက် တစ်ပွဲလျှော့ကစားထားပေမယ့် ပွဲစဉ်ရေးဆွဲမှုအရ ထိပ်ဆုံးမှာ ရပ်တည်ခွင့်နဲ့ လွဲချော်နေခဲ့တာ ကြာပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ ယူနိုက်တက်တို့ မကန်ခင် ၂၄ နာရီအလိုမှာ ၁၉ ပွဲချင်း တူညီအောင် ကစားခဲ့ရပြီး အိမ်ကွင်းမှာ စိတ်အနှောင့်အယှက်လာပေးထားတဲ့ ဝက်စ်ဘရွန်းကို အဝေးကွင်းမှာ အမှိုက်လှဲသလိုမျိုး ရှင်းလင်း အနိုင်ယူလိုက်ပြီး အမှတ်ပေးဇယားရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သလို ပြိုင်ဘက်တွေကို အကောင်းဆုံး စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်အနှောင့်အယှက်တော့ ပေးလိုက်ရမှဆိုတဲ့ အဂျာယီ – မန်ချက်စတာစီးတီးအိမ်ကွင်းမှာတုန်းက သူ့ရဲ့ ကန်ချက်ကို ရူဘင် ဒီယက်စ်က တားဆီးရာမှာ Own Goal နဲ့ အထိနာခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်ကို စီးတီးဖန်တွေ မမေ့သေးချိန်မှာပဲ လီဗာပူးလ်ကိုလည်း သွားရောက်ထိုးနှက်ခဲ့တဲ့ နိုင်ဂျီးရီးယားသား အနေနဲ့ ဒီနေ့မှာလည်း ပွဲစပြီး မကြာခင်မှာပဲ အီဒါဆန်ကို ဒုက္ခပေးခဲ့သေးပြီး ဂိုးသမားရဲ့ ကာကွယ်မှုကောင်းခဲ့လို့သာ ဧည့်သည်တွေ မျက်နှာ မပျက်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဘရိုင်းနား မပါပေမယ့်လည်း – ဒီဘရိုင်းနား မပါဝင်နိုင်ပေမယ့်လည်း ဒီကွက်လပ်ကို ကျန်တဲ့ အရည်အသွေးမြင့်ကွင်းလယ်လူတွေက အကောင်းဆုံး ဖြည့်ဆည်းပေးသွားခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဖန်တီးမှုနဲ့ ဘောလုံးဖြန့်ဝေမှုအတွက် မာရက်ဇ်၊ စတာလင်နဲ့ ဘာနာဒို ဆေးလ်ဗားတို့က အဓိက တာဝန်ယူခဲ့ကြသလို ဂိုးသွင်းတာဝန်ကိုတော့ ဂွန်ဒိုးဝမ်က အပိုင်စားရယူခဲ့ပြီး လူငယ်ကစားသမား ဖိုဒန်ကတော့ နှမ်းဖြူးရုံလောက်ပဲ ကျန်တော့တာပါ။ ပြိုင်ဘက်တွေအနေနဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယမ်သား ဒဏ်ရာရလို့ ဝမ်းသာနေတာ အလကားပဲဆိုတဲ့ စီးတီးတို့ရဲ့ တုံ့ပြန်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ကယ်တင်ရှင်ကြီး ပထမဆုံးအကြိမ် မျက်နှာပျက်ရတော့မှာလား – ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ တန်းဆင်းဇုန်ထဲက အသင်းတွေကို အောင်အောင်မြင်မြင် ဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ကယ်တင်ရှင်ကြီး ဆမ်အလာဒိုက်စ်ကတော့ ဒီရာသီမှာ မမျှော်လင့်ဘဲ ပထမဆုံးအနေနဲ့ မျက်နှာပျက်သွားရနိုင်ပါတယ်။ အရင်တုန်းက တန်းဆင်းဇုန်ရုန်းဘက်များပြားသလို အသင်းကြီးတွေအနေနဲ့ အမှတ်လှူ အမှားခံနိုင်တာက ဒီနေ့ခေတ်နဲ့ ခြားနားနေချိန်မှာ ဖူလ်ဟမ်၊ ရှက်ဖီးလ်ဒ်တို့နဲ့ သုံးသင်းတည်း ရုန်းရမယ့် တန်းဆင်းဇုန်သားတွေအနေနဲ့ အပေါ်က အသင်းတွေ မှားအောင် ထိုင်ဆုတောင်းဖို့ပဲ ရှိနေပါတယ်။
အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းနဲ့ ဂွန်ဒိုးဝမ် – ကွင်းလယ်လူ ဂွန်ဒိုးဝမ်ကတော့ နောက်ဆုံး ၈ ပွဲမှာ ၇ ဂိုး ရယူထားနိုင်ခဲ့ပြီး မန်စီးတီးတို့အတွက် ပြိုင်ပွဲစုံမှာ သွင်းဂိုး ၉ ဂိုးနဲ့ အသင်းရဲ့ ဂိုးသွင်းဘုရင်အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဝက်စ်ဘရွန်းအသင်းကိုတော့ ပထမအကျော့ရော ဒုတိယအကျော့ပါ ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီး ၂ ပွဲမှာ ၃ ဂိုး ရရှိခဲ့ပြီး ဂျာမန်သားအနေနဲ့ ဖန်တီးမှုထက် သွင်းဂိုးဘက်မှာ ပိုမိုတာဝန်ယူနိုင်ခဲ့သလို ဒီရာသီက သူ့ရဲ့ ကစားသမားဘဝ အမြင့်ဆုံး ဂိုးသွင်းမှတ်တမ်းကိုလည်း ရရှိထားခဲ့တာပါ။
အဂွေရိုနဲ့ ဂျေဆူးစ်တို့ အပယ်ခံရတော့မှာလား – စီးတီးတို့အတွက် ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ နောက်ဆုံး ၇ ပွဲဆက် အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းမှာ ပဲလေ့စ်နဲ့ တစ်ပွဲမှာသာ ဂျေဆူးကို သုံးခဲ့ပြီး အဲ့ဒီပွဲမှာ ဘရာဇီးလ်သားအနေနဲ့ ဂိုးမသွင်းနိုင်ခဲ့လို့ ထည့်တွက်မခံရသလို ဒီနေ့မှာလည်း လူစားဝင်ပြီး ဂိုးမရခဲ့တာကြောင့် အဂွေရိုနဲ့ပါ ပေါင်းပြီး ပြောရရင် တိုက်စစ်မှူးတွေ ဂိုးမသွင်းခဲ့တာ ၁၂ ပွဲ ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဂွါဒီယိုလာကို စွယ်စုံရ ကွင်းလယ်လူတွေက ကယ်တင်ခဲ့ရပြီး အဂွေရိုနဲ့ ဂျေဆူးစ်တို့ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကတော့ မေးခွန်းထုတ်စရာလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
၄၈ ဂိုးနဲ့ ဂိုးပေးထူးချွန် – ဆမ်ကြီး ကယ်တင်ရမယ့် ပြဿနာ ဝက်စ်ဘရွန်းမှာ ကြီးမားတဲ့ အားနည်းချက်ကြီးတစ်ခုလည်း ရှိနေပြီး ဒီရာသီမှာ တခြားအသင်းတွေထက် သိသိသာသာ ဂိုးပိုပေးရတဲ့ ဘက်ဂီတွေဟာ ပွဲ ၂၀ ကစားပြီး ၄၈ ဂိုးအထိ ခွင့်ပြုထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပွဲပျမ်းမျှ ၂.၄ ဂိုး ပေးထားရတဲ့ ဝက်စ်ဘရွန်းတို့အနေနဲ့ အနီးဆုံးက ပဲလေ့စ်ထက် ၁၂ ဂိုး ပိုပေးထားရချိန်မှာ ထိပ်ဆုံးက ၁၃ ဂိုးသာ ပေးထားရတဲ့ မန်စီးတီးတို့ဆီကို နောက်ထပ် ၅ ဂိုး အလှူပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
27 Jan နံနကျခငျး နောကျဆုံးရ ခြဲလျဆီးသတငျးမြား စုစညျးမှု